GV Face: El Chapo Ve no amin’ny T-Shirt Anao? Ny Fanaovana Ny Herisetra any Amerika Latinina Ho Zava-Manintona Sy Mampientanentana · Global Voices teny Malagasy
GV Face: El Chapo Ve no amin'ny T-Shirt Anao? Ny Fanaovana Ny Herisetra any Amerika Latinina Ho Zava-Manintona Sy Mampientanentana
Voadika ny 23 Mey 2016 18:27 GMT
T-shirts, hira, laza, ary eny hatramin'ny antsafa ifanaovana amin'ny Rolling Stones [mg] Iza no mandresy ary iza no resy amin'ny fanaovana ny herisetra ho zava-manintona?
Any amin'ny toerana izay ankavitsiana ny fanararaotra ary mandady miakatra tsikelikaly ny fanavakavahana sy ny fahantrana, mety ho lasa matanjaka ny sarin'ny herisetra izay efa ara-dalàna, manintona sy mampientanentana aza.
Amin'ity fizaran-tantaran'ny GV Face ity, hotrandrahintsika ireo olana tafapetraka rehefa misy maka sy lasa atao fanintonana any amin'ny kolontsaina pop (hira) sy ny fialam-boly ny sarin'ireo jiolahin'ny cartel. Miresaka amin'i Elizabeth Rivera sy Laura Vidal, tonian-dahatsoratr”i Amerika Latinina izahay sy amin'i Robert Valencia, mpandray anjara hatry ny ela ato amin'ny GV.
Hatolotray sy hiadian-kevitra ny fomba sasany avadik'ity fahatalanjonana ity ho lasa fomba vaovao ilazàna tantara, eny hatramin'ny tranga niainana nomena endrika tsara miampita sisintany aza. Na i Hollywood na ny televiziona Amerikana Latina dia samy nitondra ny fitomboan-dazan'ny rongony avo lenta (narco-phenomenon) tao amin'ny fahitalavitra kely ary nampiely haingana dia haingana ny sary ho lasa entina hamantarana sy itsarana olona an-tendrony.
Vokatr'izany, niteraka fahagagana amin'ny zavanisy niainana taloha izay efa anisan'ny amantarana an'i Amerika Latinina an-taonany maro ny fomba fijery avy any Etazonia amin'i Amerika Latinina. Izany no nitondra ny fianahan'ny sary vaovao tsy feno, sy ny tsy fahitana ireo tena lasibatry ny lazaina ho “ady amin'ny rongony”, dia ireo olompirenena amin'ny fiainana andavanandrony izany.
Sary misongadina: graffitin'i Chapo nivoaka sary tamin'ny 27 marsa 2016 tao amin'ny Flickr avy amin'i Julia d** P** K****. (CC BY-NC-SA 2.0)